सांसद पार्वती डिसी चौधरीलाई ठगीको आरोप « Chhahara Online
सांसद पार्वती डिसी चौधरीलाई ठगीको आरोप
दाङ, २१ माघ । दाङ लमही निवासी सांसद पार्वती डि.सी. चौधरीलाई रकम ठगी गरेको भन्दै संसद सचिवालयमा उजुरी परेको छ ।
प्रतिनिधिसभामा समानुपातिकबाट सांसद बनेकी दाङ लमही नगरपालिका वडा नं. ५ निवासी चौधरीलाई कारवाहीको माग गर्दै पीडितहरुले संसद सचिवालयमा उजुरी दर्ता गराएका हुन् । चौधरीलाई दाङको तत्कालीन गढवा गाविसका कांग्रेस उपसभापति समेत रहेका कृष्णराज पाण्डे र लिलाबहादुर थापाले ८ लाख ठगी गरेको आरोप लगाउँदै उजुरी दिएका हुन् ।
सांसद चौधरीले २०७४ सालमा शुरुमा तीन लाख र पछि ५ लाख समेत गरी आठ लाख रुपैयाँ लिएकोमा पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि फिर्ता नदिएपछि उजुरी गर्नु परेको पीडितले बताएका छन् । पार्टीमा पटक–पटक उजुरी गर्दा पनि सुनुवाई नभएपछि संसद सचिवालय गुहार्नुपरेको उनीहरुको भनाई छ ।चौधरीलाई उनको एभरेष्ट बैंकको खातामा दुईपटक रकम पठाएको भौचरसमेत सचिवालयमा पेश गरिएको उनीहरुले बताएका छन् ।
विश्वासको सम्बन्धका कारण पार्टीको नेतालाई दिएको पैसा फिर्ता नगरेपछि कानुनी कारबाहीको लागि जानुपरेको पाण्डेले बताए । संसद सचिवालयका महासचिवलाई सम्बोधन गरेर सोमबार दर्ता गरिएको उजुरीमा सांसद चौधरी आफूहरुको सम्पर्कमा आउन नचाहेकाले उनलाई झिकाएर रकम दिलाइदिन आग्रह गरिएको छ ।